SERASERA, TENY MALAGASY: 05/02/11 - rov@higa
SERASERA, TENY MALAGASY: 05/02/11
5 Février 2011, 23:03pm
Mety ho samborina ny Profesora Zafy Albert?
Fandehan-javatra maro no efa nataon’ny “Prof” ka nahafahana nisambotra azy. Tsy mbola nisy anefa izany hatramin’izao. Ny antony?
Niteraka resa-be ilay hetsika nataon’ny Profesora Zafy Albert tetsy amin’ny hotel Carlton afakomaly. Ambetin-dresak’olona teny an-tsena sy an-dalambe rehetra teny ilay ampamoaka momba ny raharaha “alatsinainy mainty” tamin’ny 26 janoary 2009 sy ny raharaha fitifirana tamin’ny 7 febroary 2009 ary … (Suivre le lien)
Tsy mazava e !
Asa raha toa ka efa mahalala sy mahazo ny tena tian’ilay sori-dalana natolotry ny Dr Simao Leonardo, iraky ny Sadc, avokoa ny Malagasy amin’izao fotoana izao. Sori-dalana eritreretiny hitondrana ny … (Suivre le lien)
ANKOLAFY RAVALOMANANA: Mitaky Pm iraisana
Ho an’ny ankolafy Ravalomanana, mety amin’izy ireo ny fanitsiana nataon’ny Dr Simao tamin’ilay tolokevitra ho famahana ny krizy. Na izany aza, nitondra ny heviny izy ireo momba ireo Andrimpanjakana. « Tokony ho Praiminisitra miainga amin’ny marimaritra iraisana no … (Suivre le lien)
PR RADANOARA JULIEN : "Miankina amintsika Malagasy ny zava-drehetra"
"Miankina amintsika Malagasy ny zava-drehetra : rehefa manaiky iny sori-dalana naroson’ny Sadc iny ny Malagasy tao anatin’ireny fifanolanana ireny dia arahaba soa, arahaba tsara ; tsy manaiky izy ireo fa mbola tokony hisy ny fanamboarana dia … (Suivre le lien)
LEHIBEN’NY GOVERNEMANTA: Hanolotra Praiminisitra ny fianakaviambe iraisam-pirenena
Toy ny efa fahita aty Afrika, miditra an-tsehatra hatrany ny fianakaviambe iraisam-pirenena. Mety tsy ho afa-bela amin’izany i Madagasikara. Araka ny tsilian-tsofina, hanolotra sy hanendry Praiminisitra ny eo anivon’ny fianakaviambe iraisam-pirenena.
Anisan’ny anarana mandehandeha any amin’ny fianakaviambe iraisam-pirenena ho Praiminisitry ny governemantan’ny firaisam-pirenena i Zazah Ramandimbiarison. Efa Praiminisitra lefitra tamin’ny … (Suivre le lien)
LALAM-PIRENENA FAHA-5 : “Bois de rose” roa kaontenera indray no sarona
Notazonin’ny Emmo/Reg avy hatrany ny kamiao nitondra kaontenera roa nitondra “bois de rose”, tany Ampilaolava Rn5. Saika haondrana any Sina ireo izao tratra izao. Teo am-piomanana ny hampiditra ireo kaontenera tao amin’ny seranan-tsambo mihitsy no tratra ireo fiarabe.
Saron’ny Emmo/Reg tao amin’ny fokontany Ampilaolava, any amin’ny … (Suivre le lien)